सामाजिक सञ्जाल र स्त्रीद्वेष- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ३, २०७६ सरिता तिवारी
काठमाडौँ — ‘ऊ बेला आफूविरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने आलोचकको पहुँचमा म थिइनँ । तर आज म फेसबुक र ट्वीटरमा त्यस्ता सबै आलोचकको पहुँचमा छु । सामाजिक सञ्जालमा मलाई घेर्न, निम्नस्तरको गाली गर्न तिनलाई आज धेरै सजिलो भएको छ । म र आलोचकबीच मात्र एक क्लिकको दूरी छ !’
केही समयपहिले बंगलादेशकी चर्चित लेखक तसलिमा नसरिनले एउटा लेखमार्फत यसो भनेकी थिइन् । नसरिन उदारवादी र मुक्त विचारमाथिको सामूहिक अस्वीकृति र घृणाका सबै रूप झेलेकी लेखक हुन् । ‘कन्फर्मिस्ट’ सांस्कृतिक सत्ता र समाजको मूलधारविरुद्ध लेखेकै कारण उनले दशकौंदेखि आफ्नै देश टेक्न पाएकी छैनन् ।
समाजको एउटा पंक्ति अपमान र घृणाको हतियार उध्याएर निरन्तर उनीविरुद्ध खनिएको छ । र त्यो पंक्तिलाई अहिले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्रविधि सञ्जालको उपयोग गरेर हिंसक प्रतिक्रिया गर्न झनै सहज भएको छ । कतिसम्म भने उनलाई यस्तैमध्येका मानिसहरू घिनलाग्दा गाली मात्रै गर्दैनन्, बलात्कारको धम्कीसमेत दिन्छन् ।
बीसौं शताब्दीको अन्त्यताकाको र आजको समाजको प्रतिक्रियात्मक चरित्रको तुलना गर्दै नसरिनले भनेको कुरा वर्तमान विश्वमा जहीँ पनि लागू हुन्छ । त्यसमा पनि धार्मिक–साम्प्रदायिक, राष्ट्रवादी भय र तनाव मौलाइरहेका समाजमा त अझ बढी ! विशेष गरी महिला र उत्पीडितमाथिको संरचनात्मक हिंसाको रूप सामाजिक सञ्जालमा ऐनाजस्तै गरी छर्लंग देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि आखिरमा समाजकै प्रतिरूप हो भन्ने कुरा यसभित्रका व्यक्तिगत (यद्यपि ती व्यक्तिगत मात्रै हुँदैनन्) धारणा, टिप्पणी आदिमा व्यक्त भैरहने चरम असहिष्णुता र शाब्दिक हिंसाले देखाउँछन् ।
हाम्रो जीवनमा अभिन्न बनिसकेको सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता र भूमिकाबारे हामी भलिभाँती परिचित छौं । सूचना र सन्देशको सम्प्रेषणमा मात्रै होइन, विचार र अनुभूतिको तत्काल प्रकाशन र शिष्ट टिप्पणीका लागि फेसबुक, ट्वीटर लगायतका माध्यमले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई कम आँक्न सकिन्न नै, तर सामाजिक सञ्जाल जीवन र समाजका कतिपय संवेदनशील विषयमा कुन मात्रामा सामाजिक बन्न सकेको छ ? यसमाथि बहस जरुरी भैसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालभित्र कुत्सित शैली र अश्लील भाषामा विरोधी स्वरलाई जतिखेरै झम्टिन सक्ने सुविधाले पनि मानिसहरूका अनियन्त्रित रोष र विकृत कुण्ठा छताछुल्ल छन् । पुरातनपन्थी सोचको अति आग्रह, चर्को असहिष्णुता र अराजकता चुलिँदो छ । प्रायः उदार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने जुनसुकै समाजको बौद्धिक तप्कामाथि यति बेला निरन्तर यस्तै पंक्तिको आक्रमण बढिरहेको छ । त्यसमाथि पनि सामाजिक संवाद र बौद्धिक गतिविधिमा अगाडि देखिने महिलामाथिको आक्रमण भीषण स्तरमा वृद्धि हुँदै छ । आज यहाँ आफ्ना केही यस्तै अनुभूति साझा गर्न चाहन्छु ।
सन् २००८ ताका नेपालमा फेसबुक भर्खरै लोकप्रिय हुँदै थियो । प्राध्यापन पेसा थाल्दै थिएँ, त्यही वर्ष । कलेजका एक कर्मचारी मित्रको सहयोगमा बडो उत्सुकताका साथ फेसबुकभित्र छिरेकी थिएँ, त्यही वर्ष । त्यसपछिका केही वर्षसम्म फोटो र सूचना राख्ने कामबाहेक अरू कुराका लागि फेसबुक उति चलाइनँ । ट्वीटर र अन्य माध्यम त धेरै पछि मात्रै चलाउन थालेकी हुँ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हातेफोनमै फेसबुक चलाउने सुविधा उपलब्ध भयो । यसपछि फेसबुकलाई वैचारिक बहसको एउटा सहज उपलब्ध मञ्च बनाउने विचारले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र पारेंँ । यसको तीव्रतामा शिष्ट असम्मतिहरूलाई स्वागत गर्नुपर्थ्यो नै, गरेंँ पनि । तर राजनीतिक र लैंगिक प्रतिशोधबाट जन्मेका यस्ता–यस्ता प्रतिक्रिया पनि पाउन थालेँ, तिनले मलाई हाम्रो सामाजिक सोचको भुइँ के हो भन्ने कुरा अति नजिकबाट चिन्ने अवसर दिए ।
विषयको गम्भीरतामा भन्दा उत्तिखेरै गरिने तीखो र फटाफट प्रतिक्रिया देखेर मलाई वास्तवमै दिक्क लाग्थ्यो । तथापि सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दामा बोल्न कति जरुरी छ भन्ने कुराले मलाई लगातार प्रेरित गरिरहन्थ्यो । यसबीच अधिकांश प्रतिक्रिया मेरो लैंगिक हैसियतका आधारमा पेलेरै र हेपेरै आए ।
कुनै विषयमा गरिएको शिष्ट बहसको आग्रहमा भन्दा मानिसहरूलाई ‘महिला भएर पनि बढ्ता जान्ने भएको’ मा मप्रति आपत्ति थियो । फेसबुकमा लामा–छोटा स्टाटसका रूपमा सार्वजनिक सरोकारका विचारहरू राखेकै कारण पुरुष वर्गबाट भोगेको हिंसा कुन स्तरसम्म थियो भने, एक जनाले त मेरा विरुद्ध मेरी छोरीको दृष्टिविन्दु बनाएर लेखेको निम्नकोटिको हिंसक कविता नै फेसबुकमा पोस्टिए । त्यसलाई वाह र आहा भनेर प्रतिक्रिया गर्ने पनि मैले चिनेका पुरुष नै थिए ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ती सबै ‘तथाकथित’ लेखक नै थिए ! तर उनको आफ्नै विवेकले भन्यो या अरू कसैले, कविताको नाममा गरिएको त्यो चरम स्त्रीद्वेषी पोस्ट अलिबेरमै डिलिट गरे । यो विषयलाई मैले यत्तिकै छोड्न भने सकिनँ, रूखो भाषामा खै–खबर लिएँ । त्यसपछि उनको खेदसहितको मौखिक माफिनामासँगै म पछि हटेंँ । एउटा पाको उमेरको (लेखक) व्यक्तिसँग, उनको त्यस्तो हर्कतविरुद्ध, त्यसरी प्रस्तुत हुनुपर्दा म धेरै दिनसम्म आफैभित्र बिथोलिइरहेंँ । तर चेतन मनले भन्यो, हिंसाको प्रतिरोधमा नउत्रनु आफैप्रतिको अन्याय थियो । यसमा केको क्षोभ ?
विचार आदान–प्रदानमा फेसबुकको भूमिकाबारे अनौपचारिक छलफलका क्रममा एक लेखकले मसँग मुख फोरेरै भनेका थिए, ‘हेरिराख्नू, तेस्रो विश्वयुद्ध पुरुष र महिलाका बीचमा हुन्छ ।’ उनले मेरा ‘ब्याक टु ब्याक’ स्टाटसमाथि व्यंग्य गर्दै वाक्युद्धतर्फ संकेत गरेका हुन् भन्ने मैले नबुझ्ने कुरो थिएन । प्रतिक्रियामा मैले भनेकी थिएँ, ‘त्यसो भए तेस्रो विश्वयुद्ध हाम्रै पालामा हुनुपर्छ !’
सामाजिक सञ्जाल कदाचित् महिलामैत्री छैन भन्ने कुरा मैले आज होइन, धेरै अघि नै बुझेकी हुँ । यसमा महिलाका कामुक तस्बिरहरूले जति ‘वाह’ पाउँछन्, तिनका निर्भीक र ‘बोल्ड’ विचारहरूले त्यति नै दुत्कार, खप्की र सार्वजनिक बेइज्जती पाउँछन् । सामान्य र भुइँतहको चेतनाका प्रयोगकर्तालाई हेरेर मैले यसो भनेकी होइन । बौद्धिक र विचार उठेको भनिएकै तप्काबाट महिलाका मतमाथि झन् ठूलो प्रहार भैरहेको मैले देखे–भोगेकी छु । जब त्यस्तो दृश्यले मेरो भद्रता र विवेकको बाँध फुटाउन थाल्छ, कहिलेकाहीँ रणचण्डीजस्तो बनेर एक–एकलाई जवाफ दिन मन लाग्छ ।
कतिपय मेरा मित्र सामाजिक सञ्जालमा मलाई बहस आमन्त्रक र प्रतिक्रियात्मक होइन, शालीन र ‘सबैको साझा’ कविका रूपमा देखिन सुझाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्— एक लेखकका रूपमा, सामाजिक कर्ताका रूपमा वा सचेत महिलाका रूपमा मेरो छवि विवादित र कुनै ‘पक्षधर’ हुनु हुँदैन । कतिपय आफन्त भन्छन्— विचार र पक्षधरताको ठेक्का लिनुपर्ने तँ को होस् ?
तीन वर्षअघि तीज पर्वबारे मैले लेखेको स्टाटसमा टिप्पणी दिँदै एक ‘वरिष्ठ’ लेखकले नै मलाई सामाजिक व्यक्ति र असल आमा बन्नुपर्ने सुझावसहित ‘डन्ट बी सोसल पुलिस !’ भनेर चेतावनी दिए । स्त्री–गरिमाविरोधी र भड्किलो तीजलाई कसरी सिर्जनात्मक बनाउन सकिएला ? मेरो धारणा यसैको वरिपरि थियो । आफूले सम्मान गर्दै आएका एक लेखकले त्यस्तो घोर विवेकविरोधी धम्की दिएको देख्दा मलाई पक्का भएकै हो, वर्गीय समाजमा लेखक पनि वर्गीय हुन्छ भनेको साँच्चै रहेछ ।
जसरी घर र समाजमा महिला निरन्तर अपमानित र लाञ्छित छन्, सामाजिक संवादका मञ्चहरूमा त्यसको हुबहु रूप देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर आदिमा महिलाको उँचो स्वर किन मन पराइँदैन भन्ने कुराको उत्तर समाजको संरचनात्मक हिंसाको भाष्यसँगै जोडिन्छ । दृढ र निश्चिन्त भएर अमुक महिलाले आफ्ना विचार राखिरहँदा अमुक पुरुषलाई आफ्नै घरका महिलाजनको ‘पोथी डाँको’बाट औडाहा छुटेजस्तो मनोवैज्ञानिक तनाव हुँदो हो ।
कतिपयले मेरा पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्– यसले आफ्नो लोग्नेलाई के गर्दी हो ? यद्यपि यो मेरो अति निजी मामिला हो, स्पष्टीकरण जरुरी छैन । तथापि, प्रेम र सद्भावले ढकमक्क फक्रेको फूलबारीजस्तो गृहस्थी धानेरै म उनीहरू जस्ताको लबस्तरो चेतनासँग लडिरहेकी हुन्छु भन्ने तिनलाई के थाहा ? अन्त्यमा, सबैभन्दा पछिल्लो अनुभव सुनाउँछु ।
गएको भानु जयन्तीमा मेरो पोस्ट थियो, ‘भानुभक्त आचार्य पुरुष, ब्राह्मण–क्षत्री र शासकका मात्रै कवि हुन् । राज्यको पछिल्लो सत्तरी वर्षयताको भाष्यले उनलाई यिनै तीन थरीको कविमात्रै बनाइरहेको छ । बाँकी जनले भानु जयन्ती मनाउनु निरर्थक छ !’ यसपछि पंक्तिकारमाथि असिनाझैं खनिएको ‘पौरुष’ भानुभक्तको होइन, आफ्नै उच्चजातीय अहंकारको बिर्केटोपी जोगाउने दस्ता हो भन्ने म राम्रै बुझ्छु । तब त स्क्रिनसट तानेरै सेयर गर्ने भानु–कुलका अर्का एक कनिष्ठ आचार्यले भने, ‘गजाधर सोतीकी घर बूढीजस्तै नानी फेला परिन्, हाम्रा बाजेले ठीकै भन्या र’चन् ।’
उनको प्रतिक्रियामा त्यही कोटिका टिप्पणीकर्तामध्ये एक बुज्रुकले लेखेका छन्, ‘यसलाई स्याङ्जाली गालीले ठोकौं ?’ मलाई लाग्छ, उत्पीडित वर्गले निहुँ खोजिरहनुपर्छ, तब न सत्ताधारी चिन्तनको वमन र दुराग्रह कुन स्तरमा छ भन्ने थाहा पाइन्छ ! नभए, सामाजिक सञ्जाल स्त्रीद्वेषको कति ठूलो प्रतिविम्ब हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ज्ञानबाट म कसरी लाभान्वित हुन पाउँथेंँ ? प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४३
शासकीय प्रणालीमा घट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४२